Ugu yaran 260 qof oo ah ciidanka cirka ayaa ku dhintay dayuurad ku burburtay Magaalada Algiers (Daawo Sawirro) – Xeernews24
Ugu yaran 260 qof oo ah ciidanka cirka ayaa ku dhintay dayuurad ku burburtay Magaalada Algiers (Daawo Sawirro)
12. April 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Dadka ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka Algeria ayay tiradooda gaadhay illaa 257 qof , sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dalkaasi.
Diyaaradda waxa ay ahayd mid militari, waxayna soo dhacday kaddib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha millitariga ay leeyihiin oo lagu magacaabo Boufarik oo ku yaallo galbeedka magaalada caasimaadda ah ee Algiers.
Weli waxaa socda baadhitanno, madaxweynaha Algeria Cabdelcaziz Bouteflika ayaa waxaa uu ku dhawaaqay saddex maalmood oo baroordiiq ah.
Inta badan dadka ku dhintay shilkan diyuuradeed ayaa waxay yihiin ciidan millitari iyo qoysaskooda, 10 qof rakaab ahaa ayaa sido kale ku geeriyooday shilka, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee dalkaasi.
Mid kamid ah xubin sare oo ka tirsan xisbiga talada haya ee dalka Aljeeriya ayaa waxaa uu ka dhawaajiyay in 26 kamid ah xubnaha taabacsan kooxo gooni-u goosadka inay kamid ahaayeen dadka ku dhintay shilka.
Diyaaraddan Ilyushin Il-76 ayaa waxay kusii jeeday magaalada Bechar koonfur galbeed dalka Aljeriya,Diyaaradda ayaa la qorsheeyay inay ku degto magalaada Tinouf oo ku taallo xadka Morocco iyo deegaanka xadka lagu muransan yahay ee western Sahara.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/04/il.jpg 426 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-04-12 00:38:512018-04-12 00:38:51Ugu yaran 260 qof oo ah ciidanka cirka ayaa ku dhintay dayuurad ku burburtay Magaalada Algiers (Daawo Sawirro)
daawo deeq raashin ah oo laga soo diray dalka Djibouti oo soo gaadhay Degmada... Dawladdaha yar yar ee Imaaraatka iyo Baxreyn oo isku gaashaantay bur-burinta...